Waffenhandel Archive - Nchịkwa Mmadụ na Ihe Osise si na PixelHELPER Foundation
ogwe aka ahia
22 nwere ike 2016
Mgbasa Ozi: Kwụsị Ụzụ Aka!
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 22. Mee 2016
Kwụsị mgbasa ozi ahia
Foto dị na foto nke isiokwu akụkọ
Akụkọ vidio na redio na telivishọn
Kwado mgbasa ozi anyị
Ezigbo ezinụlọ Oetker na-akwadebe
Mgbe Bundeswehr na-agafe Siria ka ọ lụso ISIS ọgụ ma ụwa na-atụ egwu ịwakpo ndị na-eyi ọha egwu na ahịa Krismas, ndị ọgaranya nke Germany na-etinye ego na ụlọ ọrụ ndị agha. N'oge na-adịbeghị anya, ụfọdụ ndị na-ekerịta Dr. August Oetker KG so na nnweta nke ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH, ndị ọrụ azụmahịa ya gụnyere ọdụ ụgbọ mmiri German. Ndị na-agbachitere ụlọ ọrụ mgbe ụfọdụ bụ ihe nkwụnye ego siri ike. Ọ bụ ezie na ọ dịkarịa ala, ọtụtụ ndị na-ebupụ ngwá agha na ọrụ Bundeswehr, kama na ahịa a na-eche na nchebe na-ejikarị ọtụtụ ọbara.
Jiri ihe omimi mee ka ikpo oku di
PixelHELPER setịpụrụ onwe ya ihe mgbaru ọsọ na oge obibia nke dị jụụ iji kọwaa ego a nke ezinụlọ Oetker. Ya mere, na oge nke oge Krismas mgbe ị na-azụta ihe maka kuki Krismas ọ bụghị ozi udo a dị ntakịrị, Bienkowski amalitelarị mkpesa. Dịka ọmụmaatụ, onye na-ese ihe nkiri na-arụ ọrụ na Dr. Oetker logo na ejiji na mbinye aka "Kanonenfutter" na ụlọ ọrụ facade nke Dr. med. Oetker na Bielefeld. O nwere ike ịbụ na ọ bụ ntakịrị ntakịrị ìhè na mbara igwe nke Bielefeld, nke na-enye ìhè n'okporo ámá ndị a na-eme nke ọma, ma ebe a ọ bụ ihe gbasara mgbasa ozi. Na kpọmkwem n'echiche a Bienkowski nwalere na Channel Slingshot a maara nke ọma na YouTube na Jörg Sprave a na-emepụta ebe a na-emepụta ụlọ.
Agha dị ka ihe nzuzo
Kedu ihe mmeghachi omume nke a nile kpalitere? A sị ka e kwuwe, e nwere ọkwa ụlọ ọrụ Bielefeld n'oge a. "Ụlọ ego ahụ bụ ihe nzuzo nke mmadụ abụọ nọ n'ezinụlọ ma ọ dịghị ihe jikọrọ ya na ụlọ ọrụ ahụ. Oetker ", dị ka otu akụkọ akụkọ banyere Neue Westfälische Zeitung si kwuo. Ya mere, Bienkowski biara na mwakpo ọzọ megide ezinụlọ Oetker iji ruo akọnuche ha. Ajụjụ nke ma ọ bụ onye nwe ụlọ ọrụ Dr. med. Oetker na-ekere òkè n'ahịa ndị agha, oge a bụ shuga na-atọ ụtọ ma bụrụ nke na-adịghị atọ ụtọ site n'aka ụmụ nwoke na-egwuri egwu nke Berlin.
Enwere ike ị ga-enwe obi ụtọ karịa pizza gị?
Nke a bụ otú Rolf Zuckowski si azụghachi "In der Weihnachtsbäckerei" ngwa ngwa wee bụrụ ọha na eze dị egwu "Na Ụlọ Ọrụ Ememe Ihe". Ụmụaka na-ajụ ndị Oetker ezinụlọ: "Ebee ka omume ahụ dị?" A na-emekọ ihe nkiri ahụ na onye uwe ojii hip hop nke Berlin bụ Vokalmatador. Ma ọ bụghị naanị na usoro nke okwu na ọdịnaya, ọdịdị nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye, nhazi ahụ bụ eziokwu. Na-echekwa ihu anụ n'ihu igbe 1,45 ogologo ogologo osisi. Na nke a na-enweghị obi ụtọ, ọ dịkarịa ala, Richard Oetker kwesịrị ịkwụsị ọṅụ nke azụmahịa ndị agha. A sị ka e kwuchara, e jidere 1976 a na igbe a ma jide ya n'agha. The hijacker nwere ezigbo anụ. Ihe ahụ ọ na-atọ ụtọ? N'ezie. Ma, olee otú ị ga-esi chefuo oge gị ma tinye ego na ngwá ahịa ndị na-emepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 40 afọ gara aga?
Maka nkwụsị ozugbo nke tank na-ebupụ gaa na Saudi Arabia PixelHELPER kwadoro ya na mkpuchi mkpu - kwụsị ngwá ọrụ ndị ahụ "ekeleghị tankị na Saudi Arabia" na Federal Chancellery na ozi Saudi Arabia.
Ndị Saudis ka dị n'etiti ndị ahịa kachasị mkpa nke ụlọ ọrụ nchebe Germany. Na ọkara mbụ nke 2015, a na-akwado ngwá agha na-ebula ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde Euro 180 na Saudi Arabia - naanị na Great Britain na Israel, e nwere ọbụna nnukwu ụgwọ.
Germany bụ onye mmeri Europe na-ebupụ ngwá agha. N'ụwa nile, ọ na-ewe ebe atọ n'azụ US na Russia. Site na gọọmentị gọọmenti etiti, ngwá agha German na ngwá agha na-enyekwa aka ike ọchịchị na ikike ọchịchị ndị dịka Saudi Arabia. Nke a agaghị aga n'ihu. Anyị chọrọ ịkwụsị ahịa na ọnwụ.
Mgbasa Ozi: Kwụsị Ụzụ Aka! July 1, 2019Oliver Bienkowski